Semalt - The Ultimate SEO Phromotha
Ukuphakanyiswa kwezimpahla noma izinsizakalo nge-Intanethi usebenzisa iwebhusayithi yakho kuyindlela ephumelelayo yokukhangisa ngenxa yejubane elimangalisayo, indawo efinyelela kuyo, kanye nokwenza lula. Izinsizakalo ezifanayo zokukhuthaza iwebhusayithi zinikezwa yinkampani yakwaSemalt SEO. Wonke usomabhizinisi / usomabhizinisi ongena online ufuna ukuthola amakhasimende amaningi ngangokunokwenzeka futhi enze / iwebhusayithi yakhe ihehe ithrafikhi enkulu ngangokunokwenzeka. Ochwepheshe beSemalt bangasiza ngalo msebenzi. Inkampani yethu ingaphezulu kokusebenzisa nje i-SEO, iyisiphulelo emhlabeni jikelele emkhakheni wokunyuswa kwewebhusayithi.
Isitatimende esingesibindi asinasisekelo nakancane. Funda impendulo yekhasimende kuwebhusayithi yethu, buka amacala angempela, futhi uzobona ukuthi uSemalt kuphela ongamelana nomsebenzi ngendlela engcono. Ngenxa yokusebenza kwethu kahle, sithuthukisa amawebhusayithi esikhundleni esiphakeme kakhulu ezinjini zokucinga futhi sisiza abanikazi bawo ukuba bazicebise. Vele, ngaphandle kobuchwepheshe obunqenqemeni, ngeke uthole impumelelo, yingakho uSemalt engagcini lapho. Sithuthukisa izindlela zethu njalo, sakha ubuchwepheshe obusha. ISemalt ayinabancintisana abalinganayo uma umgomo wakho ukuphumelela ngokuthuthuka kwewebhusayithi - kwenze ngokubambisana neSemalt.
Inkampani yethu ibonakala ngezinga eliphakeme lokusebenza kahle kwezindlela ezihlongozwayo zokusebenzisa iwebhusayithi. Akunangqondo ukuletha ukuphikisana, sincike emaqinisweni kuphela, aqinisekiswa yimiphumela ephumelelayo. Sekuyiminyaka eyishumi sibhekene nezinselelo ezinkulu kakhulu futhi ngaso sonke isikhathi senza isinqumo esifanele. Ubuciko bokuwina busisegazini le nkampani. Iqembu leSemalt yiqembu labadlali abasezingeni lomhlaba. Phakathi kwabo kukhona ochwepheshe be-SEO abanolwazi, abaphathi abaqeqeshiwe, ongoti be-IT, ababhali abanekhono, nabaqambi.
Ngaphandle kobuchwepheshe obusebenza ngokuguquguquka, wonke amalungu eqembu uyazi izilimi ezimbalwa zomhlaba futhi ufaneleke kahle ekusebenzeni kwe-SEO. Ngenqubo yokwenza iphrojekthi enekhono, iqembu elinolwazi linaka zonke izinhlobo zamapharamitha athinta ukusebenza ngempumelelo kwewebhusayithi. Kubalulekile ukuba nokucabanga ngamasu, njengoba isiza ngasinye siveza icala ngalinye, ngakho-ke kudinga indlela ehambisanayo nendlela yokusebenzisa i-SEO.
Ukubuyekezwa Okufishane kwe-SEO
I-Search Engine Optimization (i-SEO) kungenye yezindlela zokunyusa ukugcwala kwethrafikhi nokuqashelwa kwewebhusayithi. Akuyona inqubo eyodwa, kepha isethi ephelele yemisebenzi ehlose ukuthuthukisa isikhundla sewebhusayithi yakho enjini yokusesha kwizicelo ezithile. Ngisho nendawo efanele idinga ukukhushulwa, uma kungenjalo, abalaleli be-inthanethi ngeke bazi ngobukhona bayo. Le yinhloso yokuphakanyiswa kwe-SEO.
Namuhla, i-SEO isiba yinto eqhubekayo. Iqiniso ngukuthi, izinjini zokusesha zihlala ziba nzima ngokwengeziwe, ngakho-ke akuhlali kucace ukuthi zingaki izicelo ezidingekayo ukugcwalisa i-athikili ngenjini yokucinga ukuze ithumele ngqo phezulu. Ngamanye amagama, izinjini zokusesha ziya ngokuya zibheka ukuthi okuqukethwe kuhlolwe kanjani ngabavakashi bewebhusayithi. Amapharamitha angaba angenakubalwa. Lesi sikhathi sobabili isikhathi umuntu asichitha kwiwebhusayithi noshintsho ngokusebenzisa izixhumanisi zangaphakathi. Kubaluleke futhi uma umsebenzisi abelana ngesixhumanisi kumabhulogi e-webhusayithi, ezinkundleni zokuxhumana, nakwamanye amapulatifomu.
Uma imininingwane esekhasini isiphelelwe isikhathi, isivakashi siyovala izinsizakusebenza. Uma isivakashi sibona ikhasi elinombhalo oqinile ogcwele imishwana ebalulekile - uyaliyeka. Ukukhethwa kwendlela yokunyusa i-SEO kuncike enjongweni yayo. Ezimweni eziningi, amakhasimende adinga ukwanda kwezivakashi kwiwebhusayithi yawo okuholela ekukhuleni kwezingcingo, ama-oda, ukuthengisa. Kepha kukhona abathengi abanjalo, abafuna nje ukubona isayithi likusikhundla esiphezulu ezinjini zokucinga bephokophela izinhloso zokufaka uphawu. ISemalt inezixazululo ezisebenzayo zomlandu ngamunye. Sizobheka imikhankaso ekhiqiza kakhulu ukukhuthaza i-SEO, efana ne-AutoSEO ne-FullSEO.
Isebenza kanjani i-AutoSEO
Umkhankaso we- AutoSEO wokunyuswa kwewebhusayithi ususabalele phakathi kwabanikazi besayithi muva nje. Umphumela wokugcina uthathwa njengokuphakamisa iwebhusayithi yakho ezikhundleni eziphezulu ku-injini yokusesha. Siqukethe izigaba eziningana zokuphoqelela futhi senziwa ngokuxhumana okuqinile nesazi seSemalt. Ochwepheshe baphethe ngokugcwele umkhankaso futhi baqinisekisa umphumela ophumelelayo. Ukulungiswa kwewebhusayithi kuzoshintsha ngokufanayo kuholele ekubonakaleni kwenqubekela phambili enjini yokusesha. Ukufingqa umsebenzi olandelayo, singagqamisa imisebenzi elandelayo ye-AutoSEO:
Ukuqala umkhankaso we-AutoSEO, kufanele ubhalise kwiwebhusayithi yethu. Ukuhlaziywa kwewebhusayithi kuqala ukusebenza, futhi uthola umbiko wokuqala ngesimo sendawo yakho enjini yokusesha. Isakhiwo sewebhusayithi sibuye sihlaziywe ngokuya ngamazinga wonke we-SEO. Uyaqhubeka nokuthola imibiko ngemininingwane ehlukile, kufaka phakathi uhlu lwamaphutha akhonjwayo. Ukubamba iqhaza kwakho kwinqubo kuhlala kukuncane, wonke amaphutha asuswa ngunjiniyela wethu we-SEO. Unjiniyela we-SEO naye uzokhetha amagama angokhiye afanele. Lesi sigaba sasidinga ukukhulisa ithrafikhi yewebhusayithi.
Manje kubalulekile ukukhetha izixhumanisi ze-inthanethi kahle ukuze uzifake kwizisetshenziswa ezithile ze-intanethi. Okuqukethwe amawebhusayithi kufanele kube okufanele kakhulu, njengoba injini yokusesha ibona okuqukethwe kuphela ngenani elinengqondo. I-Semalt igxila ekukhetheni izinsiza ezifanele zokufaka ezinye izixhumanisi. Zonke izenzo ezenziwa ngongcweti azinangozi ngokuphelele kuwebhusayithi; ngaphandle kwemenenja uqobo ibheka inqubo.
Isinyathelo esilandelayo ukwenza izinguquko ezidingekayo kuwebhusayithi. Ochwepheshe baqondiswa imininingwane evela embikweni naku-FTP (I-File Transfer Protocol). Ushintsho ngalunye lunomthelela ekwenzeni kahle okusebenzayo, ngakho-ke lesi sigaba sidinga ulwazi oluhle kakhulu ekuphakanyisweni kwe-SEO nokunemba okukhulu. USemalt uyazi zonke izibuyekezo ezisezingeni futhi ufaka amagama angukhiye adingekayo ngesikhathi. Amagama angukhiye ayahlolwa ukufanisa okuqukethwe ngaphambi kokufaka isicelo. Ukusebenza ngokuqhubekayo kuyaqhubeka; usaqhubeka njengombukeli uqopha imiphumela emihle. Ukuqhuba umkhankaso we-AutoSEO kungapheli inyanga kubiza u- $ 99.
Okudingayo ukwazi nge-FullSEO
Kusukela ekuqaleni, kufanele kuqashelwe ukuthi umkhankaso we-FullSEO uwukusebenziseka kwewebhusayithi ngesikhathi esifushane kunazo zonke esake senzeka. Lo mkhankaso uhlinzeka ngempumelelo yangaphandle neyangaphakathi yewebhusayithi. Le nqubo ifaka izigaba eziningana lapho ngamunye wabo ehlose ukukhulisa isilinganiso sewebhusayithi. Lo mkhankaso ubhekwe ngumphathi onolwazi, kanti lezi zenzo zenziwa ngqo uchwepheshe we-SEO. Ukusebenza kwe-FullSEO kuqinisekiswa yimiphumela esheshayo yesikhundla esiphezulu sewebhusayithi enjini yokusesha. Ngaphandle kwalokho, ayivumeli izimbangi zakho ukuba zisondele isikhundla sewebhusayithi yakho.
Ukwethulwa komkhankaso we- FullSEO uqala ngokushesha lapho ubhalisa kwiwebhusayithi yethu. Ukubhaliswa okuqediwe kusho ukuqala kokuhlaziywa kwewebhusayithi. Isigaba sokuqala ukwenziwa kwangaphakathi. Kubandakanya ukuhlola ukwakhiwa kwewebhusayithi nokunikeza umbiko onemininingwane ngomphumela wokuhlaziywa. Ngaphezu kwalokho, uchwepheshe we-SEO uhlola ngokucophelela zonke izakhi zesiza futhi anqume umongo we-semantic. Umbiko olandelayo ukhombisa wonke amaphutha akhonjwe, alungiswa ngokushesha. Ukusebenziseka kuqhubeke kuhamba. Ukuze sikhulise ukugcwala kwewebhusayithi, sidinga ukukhetha amagama angukhiye afanele. Onke amagama agqamile akhethwe ngokunakekela okukhulu, ngoba adlala indima enkulu ekuphakanyisweni. Ngokufinyelela kwe-FTP, uchwepheshe wenza izinguquko ezidingekayo kuwebhusayithi.
Isigaba sesibili ukwenziwa kwangaphandle. Kubandakanya ukufaka izixhumanisi kwizinsizakusebenza ze-niche. Kubalulekile ukuthi okuqukethwe kwakho kuhambisane nalezo izinsizakusebenza. Lapho izixhumanisi sezifakiwe, iwebhusayithi iqala ukwanda ngokuzenzakalelayo. Isibopho esikhulu sisezifundweni zethu ze-SEO enqubeni yokukhetha izixhumanisi ezifanele nezinsizakusebenza ezethembekile. Ngenhlanhla, uSemalt usebenzisana namawebhusayithi aqinisekisiwe ahlangabezana namazinga we-SEO. Izixhumanisi ezifakwe kulezi zingosi zifaka isandla ekukhuthazeni ngempumelelo. Umsebenzi wakho womkhankaso awudingeki, kepha uhlala wazi zonke izinguquko ezikuwebhusayithi. Imibiko engaguquki ikwazisa ngokukhula okuthe xaxa kwezilinganiso. Futhi, ungaxhumana nochwepheshe nganoma isiphi isikhathi futhi udinge noma yiluphi ulwazi oluhlobene nesayithi lakho.
Uma, ngasizathu simbe, ukukhushulwa kwe-SEO kumisiwe, ngeke kulethe izinkinga ezinkulu. Vele, i-Google izosusa ama-backlinks kusuka kungobo yomlando yedatha cishe inyanga, kepha amasheya azohlala endaweni ethile. Lesi sikhundla asiweli ngaphansi kwezinga elalikhona ngaphambi kokuqala i-FullSEO. Ukubala izindleko zesevisi, kufanele wenze isinqumo kuqala. Intengo yokugcina izonqunywa ngemuva kokuthi iwebhusayithi yakho ihlolwe yisazi sethu se-SEO. Intengo ngeke ibonakale iphakeme kakhulu, kepha kuya ngesimo sewebhusayithi yakho. Kunoma ikuphi, zonke izindleko zikhokha kathathu inani.
Umthetho oyisisekelo wokusebenzisa kahle i-SEO isu elihle. Uma iwebhusayithi igcwele amaphutha enkomba futhi inezinkinga zobuchwepheshe, okuwukuphela kwendlela yokuphuma ukuqoqa imininingwane yokuhlaziya. USemalt usungule uhlelo oluhlukile lokuhlaziya oluvumela ukufeza ukusebenza ngempumelelo. Lokhu kuyi-Analytics, uhlelo lokuhlola iwebhusayithi elihlukile eliqondiswe ekuboneni amaphutha ezobuchwepheshe nokulungiswa kwawo. Zonke izinyathelo ezithathiwe zizoba nomthelela ekusetshenzisweni ngempumelelo kwewebhusayithi. Ngaphezu kwalokho, ama-Analytics anika ukufinyelela idatha yewebhusayithi yakho. Ama-analtics afaka imisebenzi elandelayo:
Ama-Analytics awagcini ekuboneni ubunzima obuhambisana nokukhuthaza iwebhusayithi. Okokuqala, inquma okuqukethwe kombhalo kwesisetshenziswa namapharamitha wayo wezobuchwepheshe. Yenza ucwaningo lokuqhathanisa Iwebhusayithi yabaqhudelani, ihlola okuhle nokubi kwabo. Ukuqoqwa kokuhlaziywa kuqala ngemuva kokubhalisa kwiwebhusayithi yethu. Umbiko wokuqala ukhombisa isikhundla sesayithi lakho enjini yokusesha. Amawebhusayithi wezimbangi zakho nawo ayahlaziywa. Ngakho-ke, ubuntu besakhiwo sabo buqashelwa ngokuphelele. Ngokwesisekelo lolu lwazi, ochwepheshe bagcwalisa izinguquko ezidingekayo, bacabangela amazinga we-SEO.
Uma une-akhawunti evumelekile, ungangeza amanye amasayithi kwikhabhinethi yakho yangasese. Onke amawebhusayithi angeziwe ahlaziywa ngokuzenzakalela, futhi uthola umbiko onemininingwane nedatha etholakele. Ama-algorithms enjini yokucinga avuselelwa ngamandla, ngakho-ke abahlaziyi bethu kuphela abayazi ngokunembile indlela yokuguqula iwebhusayithi ukuba ibe phezulu kakhulu enjini yokusesha. Ngokuqoqa imininingwane yokuhlaziya, kuzoba lula ukuchaza amagama afanele. Ama-analtics aveza amagama agqamile ahambelana nokuqukethwe iwebhusayithi. Nganoma yisiphi isikhathi, ungangeza amanye amagama angukhiye noma ususe lawo angadingekile. Le nqubo izoba nomthelela omuhle ekukhuleni kokugcwala kwewebhusayithi.
Inqubo yokuhlaziya yenziwa ubusuku nemini ngaphandle kokubamba iqhaza kwakho. Uthola imibiko yomsebenzi nemiphumela yazo zonke isenzo. Imiphumela ihlala imangaza, ngoba ubona ukunyuswa okuphumelelayo kwewebhusayithi enjini yokusesha. Uqaphela isikhundla sabaqhudelana bakho, futhi i-Analytics ithatha izinyathelo ezivumela iwebhusayithi yakho ukuba ibadlula bonke. Lokhu iqiniso elisobala, iwebhusayithi yakho izohlala iphakeme ngokwesikhundla. Kulula kakhulu ukusebenzisa i-Application Programming Interface. Nge-API, yonke idatha ivumelaniswa ngokuzenzakalelayo. Uhlala wazi izibuyekezo, kepha ungenzi imizamo. Kukhona inkokhelo esunguliwe yenkonzo yokuhlaziya. USemalt usungule amaphakheji alandelayo we-Analytics:
I-Semalt futhi ihlinzeka ngezinsizakalo eziningi zokuthuthukisa iwebhu. Ochwepheshe basebenzisa izindlela ezahlukahlukene zokwakha amawebhusayithi ezentengiso. Ngakho-ke, izingxenye zewebhusayithi zenziwe ngenkuthalo, zihlanganiswe nezinhlelo zokusebenza zenkampani yangaphandle kanye nohlelo lokuphathwa kokuqukethwe. Isidingo esikhulu sabathengi sifaka okunikezwayo njengamamojula wokugcina aphezulu akhethekile we-e-commerce nama-API.
Ividiyo Yokuphromotha ngoSemalt
Ibhizinisi liyaphumelela kuphela lapho umkhiqizo walo ubangela impendulo engokomzwelo ngaphakathi kwabathengi. Isikhangiso sevidiyo yifomethi ejwayelekile kakhulu eqinisekisa ukukhushulwa okusebenzayo kwempahla nezinsizakalo ezikhangisiwe. Ividiyo enjalo iletha ithrafikhi ethe xaxa kuwebhusayithi yakho, yingakho uSemalt esethule ukukhiqizwa kwevidiyo yokuphromotha . Ividiyo eyenziwe ngathi ikhombisa zonke izinzuzo zenkampani yakho. Sinikezela ngezinketho zevidiyo yetemplate nangokuthanda kwakho. Intengo yenketho yesibili yehlukile futhi inqunywe ngemuva kokuba iprojekthi kuxoxwe ngayo. Ividiyo yephromoshini iqinisekisa impumelelo esheshayo yebhizinisi lakho.
Le ndatshana ikhombisa ngokusobala izinzuzo zokusebenza noSemalt. Eqinisweni, izinzuzo zibaluleke kakhulu. Ngeke sinikeze izithembiso ezingenamsebenzi, ngoba iphuzu aligcini ekwakheni iwebhusayithi. Sizimisele ukukwenza ucebe ngazo zonke izindlela ezitholakalayo. Impumelelo yakho ukuchuma kwethu, ngakho-ke khulisa ibhizinisi lakho noSemalt. Musa ukuchitha isikhathi sakho. Xhumana nathi ngaso leso sikhathi. Sinezihluthulelo zempumelelo yakho!